SXAE-412 အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် CNC4အရောင်မျာ-sxaequipment-Gofair Chinese China Manufacturer Supplier Factory
Burmese SXAE-412 အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် CNC4အရောင်မျာ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် CNC4အရောင်များမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်တွေကို (servo စက်)
ဘက်စုံသုံး, rotary, multicolor, ဆလင်ဒါနှင့်ဘဲဥပုံအရာဝတ္ထုအဘို့, စပျစ်ရည်ကိုဖန်ပုလင်း, အရက်ဖန်ပုလင်း, ဖန်အိုး, ဖန်ပြွန်, ခွက်, ခွက်စသည်တို့ကို
1. အလိုအလျောက်တင်စနစ်, ပေါင်းစုံဝင်ရိုး servo စက်ရုပ်။
2. Indexing စားပွဲပေါ်မှာစနစ်, အကောင်းဆုံးတိကျမှန်ကန်မှု။
3. အလိုအလျောက်ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ်, အားလုံး servo မောင်းနှင်: ပုံနှိပ်ခြင်းဦးခေါင်း, ကွက်ဘောင်, လည်ပတ်, ကွန်တိန်နာတက် / ဆင်း, ရှိသမျှ servo မော်တာအားဖြင့်မောင်းနှင်။
4. လည်ပတ်မှုအတွက်မောင်းနှင်တစ်ဦးချင်းစီ servo motor ကိုအတူအားလုံး jigs ။
5. လျင်မြန်စွာနှင့်တစ်ကုန်ပစ္စည်းမှအခြားကူးလွယ်ကူသောပြောင်းလဲမှု။ ရိုးရှင်းစွာထိတွေ့မျက်နှာပြင် parameters တွေကို Adjust ။
6. LED ကိုခရမ်းလွန်တင်နိုင်စနစ်, ကြာကြာဘဝအချိန်, စွမ်းအင်ချွေတာရေး။
7. အလိုအလျောက်ချ, servo စက်ရုပ်။
အီးနှင့်အတူ 8. အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆင်ရေး။
1. ဦးခေါင်းပူဦးခေါင်း, အတူတကွ multicolor မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပူပြင်းစိုင်းနေမှုကိုချေဖျက်, အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါတန်ဆာလိုင်းမှလွတ်မြောက်ရန်မှတ်ပုံတင်အမှတ်မပါဘဲ cylindrical ထုတ်ကုန်များအတွက် 2. ကင်မရာရူပါရုံကိုစနစ်,, ။
ပုံနှိပ်မြန်နှုန်း: 1800-2100 ပိုငျးပိုငျး / နာရီ (ကွဲပြားခြားနားသောအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်ပုံနှိပ်ပုံရိပ်ကိုများအတွက်ချိန်ညှိ)
ပုံနှိပ်ဧရိယာ: အချင်း 30-90mm, အမြင့် 80-220mm
စက်အတိုင်းအတာ: L ကို 5400 * W က 5000 * H ကို 2400mm
Power: AC အ 380V, 3-အဆင့်, 50Hz / 60Hz, 23Kw (သမားရိုးကျခရမ်းလွန်), 5KW (LED ခရမ်းလွန်)
မြင့်မားတဲ့စွမ်းရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်, ရှည်လျားရေရှည်ကြာရှည်ခံမှု, သင့်သံသရာအချိန်တိုးမြှင့်,
အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ, ထိရောက်သော, အီး standard.precisely ပုံနှိပ်ပုံရိပ်နှင့်ဂရပ်ဖစ်, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေး, အရည်အသွေးမြင့်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် CNC4အရောင်များကိုပုံနှိပ် servo motor ကိုစနစ်ကကုန်ထုတ်လုပ်မှုမျက်နှာပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
အပ်ချုပ်သည်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် CNC4အရောင်များကိုပုံနှိပ် servo motor ကိုပစ္စည်းကိရိယာများမျက်နှာပြင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ထုံးစံလုပ်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် CNC multicolor မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ် servo စနစ်ကစက်ရုံ။
ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အပုံနှိပ်နီးပါးမည်သည့်အလွှာ, ကောင်းမွန်သောကော်နှင့် opacity ကိုမှင်,